DAAWO+AKHRISO: Wararkii u dambeeyey Dhuusa-Marreeb, Qodobka laysku mari la’ayahay Iyo doodaha dhinacyada.
MUQDISHO(P-TIMES) – Maanta wey ka duwanayd maalmihii lasoo dhaafay, dhinacyaduna ma jirin kulamo toos ah oo ay yeesheen, tan iyo wixii ka dambeeyey xalay markii ay qaaten kulan saacado dheer ay ku jireen, kaas oo waxa rasmiga ah ee kasoo baxay aan lala wadaagin warbaahinta.
Laakiin xogo laga helay dhinacyada madaxda ka qeybgashay waxay tibaaxayaan in qodobka ugu adag ee laysku mari la’ayahay uu yahay midka la xariira qabsoomida doorashooyinka, waqtiga iyo nooca ay noqonayan.
Dawlad gobaleedyada qaarkood, waxay soo jeedinayaan in ay doorashadu ku dhacdo waqtigeeda oo bisha November ee nagu soo wajahan ay bilaabato soo xulida xubnaha baarlamaanka, Decemberna la dhameystiro, ayna noqoto mid dad-ban oo ay awooda maamulida leeyihiin dawlad gobaleedyadu.
Doodaas ayay qabeen maalmihii lasoo dhaafay iyo kahorba intii khilaafku uu taagnaa maamul gobaleedyada, oo doonaya in ay yeeshaan awooda soo xulida xubnaha golaha baarlamaanka, Halka Aqalka Sare-na ay dooranayaan mudanayaasha baarlamaanada.
Dhinaca kale madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxay xoguhu cadeynayan in ay doonayaan in doorasho ka duwan tii dhacday sannadkii 2016-kii oo lagu eedeeyey in ay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin dhaceen la qabto, taas oo loo dhaweynayo shacabka, iyadoo la waafajinayo xeerka doorashooyinka oo ay maamulada qaarkood diidan yihiin, kaas oo dhigaya qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in uu doodas qabo Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo, oo bishii June ka hor sheegay barlamaanka Faderaalka in la qaban doono markii ugu horeysay doorasho ay codkooda ku soo dooranayaan xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed, laakiin dadka dhaliilaya aragtidaas ayan aaminsan in aysan waqtigan ka dhici Karin dalka, gaar ahaana aan lagu qaban Karin mudada u hartay Hay’addaha dawladda.
2 soo jeedin oo kale oo dhextaal ah ayaa kulamada lagu soo qaaday oo ku jiheysan in mudo dheeraad ah ay helaan Hay’addaha dawladda si loo gaaro doorasho lagu wada kalsoon yahay, laakiin maahan mid ay dhinacyadu isku aragti ka qabaan.
Dooda 2aad ayaa iyana aan aheyn mid rasmi ah ayna ahayd fikrad madasha wada hadalka la keenay ayaa ah in doorasho hadda la qabanayo ay noqoto mid Xildhibaan kasta ay soo doortaan ugu yaraan 1000Ergay, taas oo maamul gobaleed kasta ka qabsoonto 3 degmo oo kamid ah ugu yaraan, cida qabanaysa ay noqoto guddiga Doorashooyinka madaxa banaan ee ay hogaamiso Xaliimo Ibrahim Yarey, laakiin maamul gobaleedyada ayaa u arka arrin waqti dheeraad ah u baahanaysa.
23-ka bishan ka hor haddii ay dhinacyadu gaari wayaan heshiis rasmi ah oo ay isku raacsan yihiin, waxay sheegayan Ilo xogogaal ah in ay dib ugu balami doonan kulanka bisha August, laakiin kulanka dambe balantiisa dawlad gobaleedyadu waxay u arkaan mid waqtiga dib u sii ridaysa laakiin aanhorumar siyaasadeed lagu gaari Karin.
Madaxweynaha martida loo yahay Axmed Cabdi Kaariye ayaa dadaal xoog leh ugu jira sidii miro dhal looga dhigi laha kulanka Dhuusa-Mareeb 2, waxaana uu dhinacyada la leeyahay kulamo gaar-gaar ah, laakiin qodobada ugu adag ee haystaa waa kuwa si siman uga imaanaya danaha isdiidan ee dhinacyada.
Dadka la socda Siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in kulanka Dhuusa-Mareeb ee hadda uu ku bilowday jawi la mid ah kii Garoowe ee sannadkii hore, kaas oo aan waxba ka soo bixin, laakiin kulan dambe oo lays kugu yimaado ayaa la saadalinayaa in uu noqon doono midka ay dhinacyadu ku gaaraan go`aan kama dambeys ah oo ah nooca doorasho.